Umlingo wabasetyhini befashoni: iqoqo lokwakheka kweeArkteco Objects of Desire
Engalindelekanga, kodwa loo nto inokumangaliswa yiArtdeco - enye iqoqo lezinto zokuzilolonga zezinto ezifunwa nguMnqweno. Ukuzalisa i-Crystal Garden ekhazimulayo, lo mgca uqokelele zonke iil shades ezifunwa kunye kunye nemifanekiso kunye kunye nokufunwa kwamehlo nemilomo. Ukwenza i-Artdeco yesikhokelo sokuhlwa kusiza isethi yeesethi ezilishumi elinambini zeSmokey Meets Metallic. Iimvulo ngokugqithisa kwimeko engekho ngaphantsi kwesiqingatha - ngaphezu kwe-cobalt, ubhedu kunye ne-pigment pigment, abachwephethi banamathoni athile ama-moss, ama-graphite nama-mahogany.
I-Smokey ekhanyayo idibanisa i-palette ye-Metallic - kwimifanekiso yemikhosi
I-pallet engaphezulu kweNude - isistim sokwenziwa kwendalo kwansuku zonke. Ukuqulunqwa ngokucophelela kuluhlu lwe-nuda luboniswe kwi-shades ekhethiweyo ezilishumi elinesibini: ukusuka kumama-pearl we-pink to satin taupa. I-Mascara entsha yeVelvet Ukuthinta iMascara Ukunqanda iMascara kuya kunceda ukufezekisa ubukeka obucacileyo-imivimbo emibini ye-brush kunye ne-eyelashes iya kuzuza ubude obumangalisayo kunye nomthamo omkhulu.
I-Meikap ene-More Than Nude: ilula kwaye ingenakulungiswa
Ukukhethwa kwe-lipstick akudingi umzamo omkhulu - i-palette yebala eli-6 Kiss Kiss inamathole amancinci ayisithupha anokuxutywa, ukuzonwabisa ngezinto ezingavamile. Iimvulo ezinomxholo obomvu, iwayini kunye nezitena zifanelekile ukugcina iziganeko ezikhethekileyo, ngelixa i-"pink" trio iya kubonisa ukufaneleka kwimini yokwenza.
Ifoto yokuphromotha ka Kiss Kiss kwi-brand brand
Iprojekthi yokupapasha i-Artdeco Objects of Desire
Ukwenziwa kwezakhono ekhaya
5 iimpembelelo eziphambili zentsebenzo engaphumeleliyo: Qaphela, kubalulekile ukwazi!
Iindawo ezingavumelekanga zokutshatyalaliswa komtshato
Iinzuzo zoMsebenzi weMoto
Izityalo ezingaphakathi: streptocarpus
Kutheni umfazi okhulelweyo ephupha?
Ikhukhi kunye nama-apricots omisiwe kunye nama-"egg"
Umlingo we crystal. I-Swarovski - ukusuka kwesazi-ndlela ukulungiselela
Yintoni enokuyenza yetshokolethi emnyama?
Isaladi nge-omelette: isitya ngendlela ecacileyo
Kwenzeka ngokukhawuleza ukubala uthando ngokubala?